Ny fomba fanoratra amin'ny fitantarana an-tsary mifanohitra amin'ny kabary ataon'ny orinasa
Tantara an-tsary mifanohitra amin'ny kabary ataon'ny orinasa
Alakamisy, Septambra 22, 2011 Alarobia, Jolay 23, 2014 Douglas Karr
Taona maro lasa izay dia voamarina tamin'ny fizotran'ny fandraisana mpiasa antsoina hoe Selected Target. Ny iray amin'ireo lakilen'ny fizotran'ny tafatafa miaraka amina kandidà vaovao dia ny fametrahana fanontaniana misokatra izay mitaky ny hilazan'ny kandidà a Tantara. Ny antony dia satria mora kokoa ny nahatonga ny olona haneho ny valiny marina rehefa nangataka azy ireo ianao mba hamaritra ny tantara iray manontolo fa tsy hanontany azy ireo eny na tsia.
Ity misy ohatra iray:
Miasa tsara amin'ny fe-potoana voafetra ve ianao? Valiny: Ie
Voatahiry… Azonao tantaraina amiko ve ny fotoana iray any am-piasana izay nanananao fe-potoana faran'izay henjana izay mety ho fanamby, na angamba tsy ho vita mihitsy? Valiny: tantara iray izay azonao atao ny manontany antsipiriany fanampiny momba.
Ny tantara dia samy manambara ary tsy hay hadinoina. Ny ankamaroantsika dia tsy mahatadidy ny fanambarana an-gazety farany novakiantsika, fa mahatadidy ny tantara farany novakiantsika isika - na dia momba ny asa aman-draharaha aza. ny Tantara Orabrush no farany tonga ao an-tsaiko ho ahy.
Ny paikadin'ny votoatin'ny Internet dia mitaky ny fialànay amin'ny marketing sy ny orinasa miteny ary manomboka milaza tantara. Paikady manan-danja amin'ny Blogging Corporate izany. Ny olona dia tsy te handre orinasa-miresaka momba ny orinasanao, ny vokatrao na ny serivisinao, te handre tantara tena izy momba ny fahombiazan'ny mpanjifanao amin'ny fanaovana orinasa miaraka aminao izy ireo!
The Hoffman Agency dia namorona infographic amin'ny Tantara an-tsary vs. Corporate Speak. Azonao atao koa ny mamaky bebe kokoa momba ny teknika fanaovana tantara ao amin'ny bilaogin'i Lou Hoffman, Zoro Isimaela.
Tags: anecdotalniterakahambaboainamaharesy lahatraresakamiteny orinasanefa matromatrokavolybe herim-poao anatinyishmaels zoroteknika,misavoritakamahazatratantaravato misakanaivelanytenaalalan'ny milina azo baikoinafivarotanamalamamalama salingnikarakarafitantaranamihasimbany maso ivoho hoffmantenyWritingfomba fanoratra
Mpanompo tsy miasa ao amin'ny Google izahay
Ny fanatsarana ny fikarohana eto an-toerana dia tsy mahasakana ny fanatsarana nasionaly na iraisam-pirenena
Sep 22, 2011 ao amin'ny 6: PM PM
Misaotra anao nanokana fotoana hanasongadinana ny fampahalalana momba ny tantara.
Ny ohatra asehonao amin'ny fampiasana ny fizotran'ny tafatafa dia tsara. Ny zavatra niainantsika tamin'ny fanontaniana misokatra dia manamafy fa ny olon-drehetra dia mahay milaza tantara.
Ankehitriny, mety tsy manana ny glibness an'i Conan na manaikitra an'i Chris Rock ny olona iray, saingy tsy maninona izany
Ho an'ny orinasa iray, ny tanjona dia ny tsy hampihomehy azy ireo eny an-dalantsara.
Ny tanjona dia ny "hifandray."
Miloka ianao, Lou!
May 30, 2012 amin'ny 3: 53 AM
Lahatsoratra tsara sy teboka mahery. Ny fitantarana tantara dia azo ampiasaina amin'ny toe-javatra marobe ary matetika no manintona kokoa kokoa noho ny fikororohana orinasa. Tia ny sary koa 🙂